Accueil > Gazetin'ny nosy > Filohan’ny “Elgeco Plus” Kitra: Ratsy fitondran-tena imasom-bahoaka
Filohan’ny “Elgeco Plus” Kitra: Ratsy fitondran-tena imasom-bahoaka
Henjana ny lalao teo amin’ny “Cnaps Sport” Itasy sy ny “Elgeco Plus” Analamanga nandritra ny fiadiana izay ho tompon-dakan’i Madakasikara, taranja baolina kitra, ny alahady 12 Novambra 2017 lasa teo, tany amin’ny kianjan-Ampasambazaha Fianarantsoa.
Tafavoaka ho mpandresy tamin’ny isa 1 no ho 0 ny “Cnaps Sport” tao anatin’ny 82 minitra nilalaovana, rehefa nidongy tsy niakatra kianja intsony ny “Elgeco Plus” satria nitaraina izy ireo fa tsy nahita intsony hono ny mason’ny mpiandry tsatokazon’izy ireo.
Nomen’ny mpitsara afovoany fotoana ny teknisianina eo anivon’ny “Elgeco Plus” hanoloana ity mpiandry tsatokazo ity, saingy tsy nanatanteraka izany izy ireo. Notsofin’ny mpitsara ny kiririoka manamarika fa tapitra ny lalao, ka nahazoan’ny “Cnaps Sport” ny amboara fahenina izao. Tsy afa-bela tamin’ny “Cnaps Sport” mihitsy ny “Elgeco Plus” hatramin’izay.
Mafy ny lalao teo amin’ny tarika roa tonta, hatreny an-kianja ka hatreny amin’ireo mpijery baolina. Marihina fa teo amin’ny fifampiarahaban’ny mpilalao fotsiny dia efa saika raikitra ny korontana teo amin’ireo samy mpilalao. Mazava ho azy fa henjana ny fifandonana teny ambony kianja. Mbola nanamafy izany ihany koa ny zava-niseho teny amin’ny “Tribune” nisy ireo manam-pahefana satria ny tomponandraikitra iray teo anivon’ny Elgeco Plus dia nanosika ny filohan’ny ligin’ny baolina kitra avy any Itasy.
Teo anatrehan’ny trangan-javatra hafahafa tany Fianarantsoa iny dia voatery nosintonin’i Doda Andriamiasasoa filohan’ny federasiona Malagasin’ny baolina kitra hiala ny “Tribune” ny mpiambina akaiky ny filohan’ny “Elgeco Plus” satria nisy basy poleta teny aminy, ary marihina fa tsy nandray ny “Médaille” sy ny loka tokony ho azy ny “Elgeco Plus” fa tonga dia nivoaka ny kianjan’Ampasambazaha.
Manoloana ireo disadisa tany Fianarantsoa ireo dia mipetraka ny fanontaniana hoe “manana toe-tsaina hanaja ny faharesena sy fifandeferana na “Fair Play” ve ny mpilalao Malagasy sy ny mpitantana klioba eto Madagasikara?”
Mandeha ny feo ankehitriny fa hirotsaka hofidiana ho filohan’ny federasiona Malagasin’ny baolina kitra ny mpitantana ny “Elgeco Plus”, ka raha izany ny toe-tsaina hoentiny hitantanana ny baolina kitra eto amintsika dia hanao ahoana ny ho avin’ny kitra Malagasy? Izy tokony hanome modely indray no manome ohatra ratsy eo imason’ny vahoaka Malagasy mpitia fanatanjahan-tena indrindra fa ny baolina kitra.
Rariny raha niala tsy ho “Staff” teknikan’ny “Elgeco Plus” intsony ingahy Raux Auguste, mpanazatra nasionaly (Barea de Madagascar), satria itsabahan’ity mpitantana ny “Elgeco Plus” ity avokoa ny lafiny teknika teo anivon’ny klioba, izany hoe izy indray no mibaiko mpanazatra !
Ny akom-baovao nalaza sy nahoraka izao tamin’iny lalao tany Fianarantsoa tamin’ny alahady iny dia ny fihetsik’ity mpitarika ny ekipan’ny “Elgeco Plus” ity eny anivon’ny fiaraha-monina andavanandro. Izy moa, izay tsy iza, fa Andriamanampisoa Alfred. Misy ny iantefan’ny fireharehany ho mpanolotsainan’ny praiminisitra ankehitriny, ary mitarika azy hanindritsindry olona izany. Misy koa fotoana ahenoana azy mampihorohoro olona amin’ny fananany fitaovam-piadiana, ka zary ikatsahany tombontsoa izany. Etsy ankilany, mirehaka isaka ny mihetsika izy satria manan-katao vokatra ny fifanarahana manokana aminy sy ny ao amin’ny Jirama ao, noho izy mpiantoka entana (fournisseur) ao amin’ity orin’asam-panjakana ity. Isan’ny “mahitahita” ao izany e! Raha tsy mahitahita ve hahazo avara-patana ao amin’ny Jirama amin’izany fiantohana entana sy kojakoja ilain’ny Jirama izany. Eritrereto fa raha vola amin’arivony no mihodina ao anatin‘izany, iza no handany andro amin’izany? Izany hoe tsy maintsy an-tapitrisany maro e! Mety ho an-jatony tapitrisa mihitsy aza.
Mandiniha tena ary mandraisa lesona raha te-hahita vokatra !